Fantatra hatrany ampitan-dranomasina ny hatsaran’ny tantely avy aty Manakara ary efa nahazoana mari-pankasitrahana volafotsy amin’ny kalitao tantely tena natioraly toa ny miel d’eucalyptus, litchis, niaouli an’ny Ilanga Nature - SSM Madagascar.
Nisy omaly ny fanomezana tranon-tantely miisa 20 avy, sy fampindramam-bola ireo tantsaha mpamokatra tantely 188 at Manakara, sy amin’ireo Kaominina miisa 18 manodidina, ho fampiroboroboana ny famokarana tantely.
Manohana azy ireo amin’izany ny fandaharan’asa FIHARIANA mba hahafahan’izy ireo hahazo fitaovana aha matihanina azy ireo tanteraka. Hihatsara ny kalitao ary hitombo ny vokatra ka hahatratra 160 taonina ny tantely vokarina isan-taona raha 60 taonina teo aloha.
Sanda fifanakalozana : Tsy mitsaha-mitotongana ny Ariary »